Izinsizakusebenza Zokuthola Nokuhlanganisa Ababiki Nezintatheli
Izinsizakusebenza eziyi-15 zokuthola nokubopha ababiki nezintatheli
ISonto, Ephreli 2, 2017 NgoMsombuluko, Ephreli 3, 2017 Douglas Karr
Izixazululo ze-Agility PR - I-suite yemikhiqizo nezinsizakalo zethenjwa yi-ejensi ye-PR nezinhlangano emhlabeni jikelele.
Ukuluma PR - Senza kube lula kumabhizinisi amancane ukuthola nokuphendula emathubeni amahle emidiya.
IGorkana - ubuhlakani bezindaba obunzulu futhi obunembile e-UK.
Siza Intatheli Iphume - Kusuka kuThe New York Times, kuya ku-ABC News, kuHuffingtonPost.com nawo wonke umuntu ophakathi, cishe abezindaba ababalelwa ku-30,000 bacaphune HARO imithombo ezindabeni zabo. Wonke umuntu uchwepheshe kokuthile. Ukwabelana ngobuchwepheshe bakho kungakulethela lelo thuba elikhulu lezindaba obulokhu ulifuna.
Intatheli - Thola izintatheli ubone ukuthi zibhala ngani.
I-Media Kitty iyisevisi ekhokhelwayo ($ 89.95 ngenyanga) yochwepheshe bebhizinisi ukuxhumana nokuhlala bexhumene nezintatheli ngokuthumela okusheshayo nokulula. Izintatheli ze-9,704 kanye ne-PR pros esebenzayo kusukela ngo-2001.
MediaOnTwitter - Thuthukisa izinhlangano nezintatheli, ababhali kanye nabanye abantu bezindaba nge-Twitter. Balandele futhi wenze usesikhathini maqondana nokuvuselelwa kokuqedwa kwenkampani. Izimpahla ezimbili ezinombiko omuhle kubantu bezindaba ku-Twitter Media ku-Twitter.
The IMeltwater Press isoftware yezobudlelwano nabezindaba ikusiza ukuthi wakhe izinhlu zemidiya ezihlosiwe kakhulu, usebenzisa okuwukuphela kosesho lwezintatheli olususelwa ku-athikili embonini. Thola izintatheli ezilingana nendaba yakho ngokususelwe kulokho abakubhalile esikhathini esedlule, bese usabalalisa umyalezo wakho nge-imeyili noma ngocingo kusikhulumi esisodwa. Ukudalulwa: IMeltwater ingumxhasi we Martech Zone
Mack Rack (insizakalo ekhokhelwayo eqala ku- $ 199 ngenyanga) ihola inhlangano ukuthi iqede ugaxekile we-PR ngokubeka izintatheli ukuthi ziphathe ibhokisi labo lokungenayo. KuMuck Rack kulula ukuthola intatheli efanele, ubone ukuthi benzani ungakufihli, bese ubathumela izingqwembe abazofuna ukuzibona.
Izindaba eziqinisekisiwe ihlinzeka ngemithombo yezindaba yomhlaba wonke ngesizindalwazi esingasesheka sezingcweti ezithembekile, ezilungele ukuxoxwa nabacwaningi nemibono yezindaba efinyeleleka ngomhlaka 24/7.
Amanothi wokuPhuma yadalelwa ukunika abakwa-PR ithuba lokubuyekeza futhi bakhulume ngokuhlangenwe nakho kwabo nezintatheli ezithile.
UProfNet - Ufuna ukubekwa kwemidiya okutholakele? Izintatheli nama-blogger bathumela izinkulungwane zezindaba ezihola njalo ngenyanga kubasebenzisi beProfNet. Ngabe abezindaba beze kuwe ngeProfNet.
Ukuxhuma Kwentatheli ingenye engisanda kuyijoyina, kepha ngiyayithanda ifomethi yama-imeyili abo kanye nohlelo lwabo lokuphendula - okuthuthuke kakhulu kune-HARO.
ImpenduloSource - Idathabheyisi Yezokuxhumana Yezindaba yase-UK - Sesha futhi ukhombe oxhumana nabo abafanelekile namathuba we-PR.
UmthomboBottle - Sisiza izintatheli nama-blogger ukuthola imithombo. Sisiza amabhizinisi nezinzuzo ze-PR ukuthola ukwaziswa kwamahhala.
Tags: beshesha pragileprluma prIntatheli ye-bulldogthola izintathelithola izintatheligorkanaharosiza intatheli ngaphandlesibongileuhlu lwezintatheliizintatheliabezindaba ku-twitterabezindaba promlamliimeltwater cindezelaukundizaizindaba ziqinisekisiwei-pitchukuphonsa amanothiI-PR Newswireprofnetukuxhumana kwentatheliuhlu lwezintatheliIzintathelisesha ama-bloggercinga izintathelifuna izintathelimthomboumthombo
Aug 14, 2015 ku-8: 50 AM
Siyabonga ngohlu lwezinsiza, Karr! Ngabe kukhona izinsizakalo owaziyo kwamanye amazwe? Isibonelo, eRussia ithandwa kakhulu pressfeed.ru. Yini edume kakhulu e-UK?